डेढ अर्बको बैंक घोटालामा राष्ट्र बैंककै मिलेमतो – KarnaliPost Daily
८ चैत्र २०७४, बिहीबार ०३:०३ March 22, 2018 by Karnali Post Daily
गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालको भूमिका मर्जरमा हतारो, कारबाहीमा अवरोध
राजनीतिक संरक्षण र शक्तिका आडमा तत्कालीन एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकका सञ्चालकले डेढ अर्ब रुपैयाँ बैंकिङ घोटाला गरेको देखिएको छ । एपेक्सका तत्कालीन अध्यक्ष विष्णु धिताललगायत सञ्चालक र व्यवस्थापनले राजनीतिक संरक्षणमा घोटाला गर्दै आएको देखिएको हो ।
रोयल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स, रारा विकास बैंक र अपी फाइनान्स मिलेर ३० असार ०७० मा एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको नाममा एकीकृत कारोबार सुरु भएको हो । मर्जरअघि नै रोयल मर्चेन्टको कर्जा बक्यौता एक अर्ब १५ करोड पुगिसकेको थियो ।
तर, राराका तत्कालीन अध्यक्ष विष्णु धितालले व्यक्तिगत लाभका आधारमा ८० प्रतिशत खराब कर्जा बोकेको रोयल मर्चेन्टसँग मर्जर गराएका थिए । टेम्पो व्यवसायबाट उन्नति गरेका धिताल कांग्रेस लमजुङका क्षेत्रीय सभापति तथा महासमिति सदस्य पनि थिए । यो राजनीतिक प्रभाव उनले उन्नतिमा होइन, आफ्नै बैंकको दुर्ग्तिमा प्रयोग गरे ।
एनसिसीका प्रमुख दुई लगानीकर्ता एनबी ग्रुप र निर्मल प्रधानबीचको विवाद अनियन्त्रित भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन जिम्मा लिएको थियो । राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधिका रूपमा तत्कालीन निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाको नेतृत्वमा रमेश आचार्य र रेशमराज रेग्मीको समूहले ०७० माघमा एनसिसीको व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएको थियो । एनसिसीको विवाद सल्टाउने र कुनै पनि समूहको सेयर अनुपात १० प्रतिशतभन्दा तल कायम गर्ने, मर्जरमार्फत पुँजी पुनर्संरचना गरेर नयाँ व्यवस्थापनलाई बैंक सुम्पेर फर्कने कार्यादेश यो समूहलाई थियो ।
मर्जरमा जाने तर कोसँग भन्नेमा राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधि व्यवस्थापनले तर्कसंगत प्रक्रिया अघि बढाउन सकेन । राष्ट्र बैंककै व्यवस्थापनले इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट बैंक, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंकसँगै एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकलाई पनि एनसिसीमा भित्राउने प्रक्रिया सुरु गर्‍यो । एउटा बैंकको सुधार गर्न आएको व्यवस्थापनले अर्को खराब बैंकलाई भित्राउन भने कुनै संकोच मानेन ।
एनसिसीमा रहेको राष्ट्र बैंक व्यवस्थापनले मर्जरको प्रक्रिया चलाइरहँदा राष्ट्र बैंकको अर्को टोलीले एपेक्सको घोटालामाथि छानबिन गरिरहेको थियो । विकास बैंक सुपरीवेक्षण विभागको टोलीले २६ भदौदेखि ३ कात्तिक ०७३ सम्म स्थलगत छानबिन गर्दा दुई अर्ब घोटाला भएको प्रतिवेदन नै तयार पारेको थियो ।
घोटालाले थलिएको एपेक्सको नेटवर्थ सयबाट शून्यमा झरेर त्यसबाट पनि तल गई माइनस २५ रुपैयाँमा पुगेको थियो । तर, त्यहीबीचमा योजनाबद्ध रूपमा गरिएको पुनर्मूल्यांकनले नेटवर्थ ४८ रुपैयाँ पुर्‍याइयो । त्यसैले एनसिसीका बहुमत सेयरहोल्डरले एपेक्ससँग मर्जरको कडा विरोध गरेका थिए । तर, राष्ट्र बैंकको टोलीले सल्लाह होइन, निर्देशनात्मक निर्णय गरेपछि १७ पुस ०७३ मा चार विकास बैंक र एनसिसी मर्जर भई संयुक्त कारोबार नै सुरु भयो ।
राष्ट्र बैंककै प्रतिवेदनले २ माघ ०७३ मै कारबाही सिफारिस गरे पनि १२ वैशाख ०७४ सम्म गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल मौन बसे । किनकि, विष्णु धितालले राजनीतिक मात्र होइन, गभर्नर नेपालको संरक्षण पनि सुनिश्चित गरिसकेका थिए ।
त्यसैले कारबाहीमा आलटाल गर्ने मनसायका साथ राष्ट्र बैंकले एपेक्समा कर्जा प्रवाहमा अनियमितता भए–नभएको अनुसन्धान गर्न पाँच सदस्यीय निरीक्षण टोली बनायो । १२ वैशाखमा काम थालेको टोलीले १६ असारमा प्रतिवेदन तयार पार्‍यो, जसमा भनिएको थियो, ‘एपेक्सको दुई अर्ब तीन करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाहमा अनियमितता भएको छ ।’ यो प्रतिवेदनले पनि कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकका दुईवटा प्रतिवेदनले एपेक्समा संगठित आर्थिक अपराध भएको भन्दै कारबाहीको सिफारिस गर्दा पनि राष्ट्र बैंंकको नेतृत्वले दोषीलाई संरक्षण दिइरह्यो । पहिलो समितिले पुसमै र दोस्रो समितिले असारमा प्रतिवेदन दिए पनि राष्ट्र बैंक नेतृत्वले कारबाही टार्न कसरत गरिरह्यो । यसबीचमा राष्ट्र बैंक बोर्डमा विवाद पनि भयो ।
तर, गभर्नर नेपाल आफैँ संगठित अपराधी धितालको पक्षमा उभिएकाले निर्णय हुन सकेन । थाम्नै नसक्ने भएपछि मात्र प्रहरीमा उजुरी भयो, धिताललगायतका योजनाकार पक्राउ परे । सामान्य विषयमा परिपत्र जारी गर्ने, कारबाही गरिहाल्ने गभर्नर यति ठूलो आर्थिक अपराधमा संरक्षक बनेर बसेको यो घटनाले राष्ट्र बैंकको इतिहासमा दाग लगाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन समितिमा सुरुमा लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाको नेतृत्वमा रमेश आचार्य र रेशमराज रेग्मीको टिम थियो । निरौला कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा भएपछि शिवनाथ पाण्डेले व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व गरे । पाण्डेसमेत कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा भएपछि पुनः निरौलाले व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व गरेका थिए । उनैले मर्जरपछि नयाँ सञ्चालक समिति निर्वा्चित गरी व्यवस्थापन सुम्पेका थिए ।
राष्ट्र बैंककै नेतृत्वमा एनसिसी बैंकले अन्य चार विकास बैंकसँग गरेको मर्जरमा पनि हतारो गरेको देखिन्छ । राजनीतिक साथै राष्ट्र बैंकको उच्च अधिकारीकै दबाबमा हतारो गरेर मर्जर गएको देखिएको स्रोत बताउँछ । ‘राष्ट्र बैंकको विकास बैंक सुपरीवेक्षण विभागले एपेक्समा घोटाला भएको आशंकामा समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण गरी रिपोर्ट तयार गर्दै थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, सो निरीक्षणको प्रतिवेदनको अन्तिम तयारी हुँदै गर्दा चार विकास बैंकलाई एनसिसीसँग मर्जर गराइयो ।’
एनसिसीले एपेक्सलगायत बैंकसँग मर्जर गरेर १७ पुस ०७३ मा एकीकृत कारोबार सुरु गरेको हो । जबकि २८ पुसमा विकास बैंक सुपरीवेक्षणले एपेक्सको अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरिसकेको थियो । विभागको प्रतिवेदनले पनि तत्कालीन एपेक्सको कर्जामा थुप्रै कैफियत देखाएको छ ।
एनसिसीसँग मर्जरको प्रक्रिया चलिरहेका वेला नेपाल राष्ट्र बैंकको विकास बैंक सुपरीवेक्षण विभागले गरेको एपेक्सको समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनका अनुसार बैंकको खराब कर्जा अत्यधिक भई त्यसबापत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) गर्दा २४ दशमलव ४७ प्रतिशत बिन्दुले पुँजीकोष माइनसमा रहेको देखाएको थियो ।
पुँजीकोष यो अवस्थामा हुँदा बैंकले १ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसको अर्थ भनेको सय रुपैयाँ सेयर मूल्य घटेर शून्यभन्दा पनि तल माइनस २५ मा पुगेको अर्थ लाग्छ । तर, एपेक्सका तत्कालीन अध्यक्ष धितालको प्रभाव र राष्ट्र बैंकको उच्च नेतृत्वको दबाबमा एपेक्स मर्जर हुँदा त्यसको सेयर मूल्य रु. ४८ कायम गरियो । यसको अर्थ एनसिसीको सय रुपैयाँ सेयर मूल्य कायम गर्दा एपेक्सको ४८ कायम गरिएको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा ३० असार ०७० मा रोयल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेड, रारा विकास बैंक लिमिटेड र अपी फाइनान्स लिमिटेड एकआपसमा गाभिई (मर्ज भई) एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको नाममा एकीकृत कारोबार सुरु गरेका हुन् । त्यसवेलासम्म रोयल मर्चेन्टको कर्जा बक्यौता १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ रहेको थियो, जबकि रारा र अपीको कर्जा बक्यौता ३३ करोड मात्रै थियो ।
खराब कर्जा भएको रोयललाई रारा र अपीसँग मर्ज गराउन उनै धितालले मुख्य भूमिका खेलेको स्रोत बताउँछ । ‘रोयल, अपी र रारा मर्जरमा पनि केही विवाद र अप्ठ्यारा थिए,’ स्रोत भन्छ, ‘तर, धितालले रोयलमा समस्या हुँदाहुँदै पनि करोडौँ रुपैयाँ कमिसन लिएर रारालाई मर्जरमा लगेको देखिन्छ ।’ एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक बन्नुअघि नै बैंकमा घोटाला सुरु भइसकेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विभिन्न तीनवटा संस्था गाभिएर असार ०७० मा स्थापना भएको एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकमा राष्ट्र बैंकले दुई वर्षसम्म निरीक्षण नै गरेन । एनसिसी बैंकसँग मर्जरमा जाने सहमति गरेको भएको ९ महिनासम्म पनि एपेक्समा कुनै निरीक्षण गरिएन । एकातर्फ मर्जर भई स्थापना भएको र अर्कातर्फ अर्को संस्थासँग मर्जरमा जान सहमति जनाएको संस्थामा कुनै पनि निरीक्षण नगरिनु स्वाभाविक नभएको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरू बताउँछन् ।
डा.पुर्ण कँडेलः‘जो क्यानडाका घरघरमा जुम्ली‘मार्सी र सिमि’को स्वाद चखाउदैं छन्’ चट्याङमा परेर जुम्लामा ४० भेडा मरेपछि कृषकको खोसियो आम्दानीको स्रोत सहज र नागरिकमैत्री बैंकिङ सेवामा राष्ट्यि बाणिज्य बैंकको जोड बजेट अभाव र टुक्रे योजनाले पूर्वाधार विकासमा चुनौती चिनियाँ टोलीको प्रतिवेदनःदैलेखमा पेट्रोल र ग्याँस भएको पुष्टी